Tarkaanfilee biyyaaleen facaatii odeeffannoo sobaa ittisuuf fudhachaa jiran! – ኢትዮጵያ ቼክ
Tarkaanfilee biyyaaleen facaatii odeeffannoo sobaa ittisuuf fudhachaa jiran!
Facaatiin odeeffannoo sobaa taatee haaraa ta’uu baatus babal’achuun miidiyaalee hawaasummaa saffisa odeeffannoowwan sobaa itti tamsa’an fi baay’ina isaanii daran dabaleera.
Rakkoolee odeeffannoon sobaa qaqqabsiisu qolachuuf biyyaaleen garaagaraa tarkaanfilee faca’iinsa odeeffannoowwan sobaa ittin to’atan hojiirra oolchaa jiru.
Biyyaaleen baay’eenis facaatii odeeffannoo sobaan walqabatee seerota tumaniiru.
Haaluma kanaan biyyaaleen tokko tokko namoota odeeffannoo sobaa tamsaasan itti gaafatamaa seeraa jala yemmuu oolchan biyyaaleen tokko tokko immoo dhaabbilee miidiyaa hawaasaa kan akka Feesbuukii fi Tiwiitaraa adabu.
Biyyaaleen namoota dhuunfaafi dhaabbilee miidiyaa hawaasummaa seeraan gaafatanis jiru.
Biyyaalee facaatii odeeffannoo sobaa ittisuuf seera tuman keessaa muraasni kunooti: –
Facaatii odeeffannoo sobaa gama miidiyaalee hawaasummaatiin raawwatamuun walqabatee Singaappor dhaabbilee miidiyaa hawaasaa itti gaafatamaa taasifti.
Kunis mootummaan ergaawwan miidiyaa hawaasaa /post/ “soba” jedhee yaadeef dhaabbileen miidiyaalee hawaasummaa battalatti akeekkachiisa akka laatan taasisa.
Qaamni seera kana cabses Doolaara 737,500 fi hidhaa waggaa 10 adabama.
Seerri Raashiyaan odeeffannoo sobaa ilaalchisee baafte qaamni odeeffannoo “oduu sobaati” jedhame tokko maxxanse dafee odeeffannicha akka haquuf carraan ni kennamaafi.
Haa ta’u malee namni dhuunfaan yookiin dhaabbatni akeekkachiisa kennameef yeroo gabaabaa keessatti hin raawwanne marsariitiin isaa kan cufamu yemmuu ta’u nama dhuunfaa yoo ta’e immoo Doolaara 6,109 adabama.
Biyyi Faransaay facaatii odeeffannoowwan sobaa ittisuuf seerota lama tumtee jirti.
Seerotni lamaan kunneenis filannoo biyya Fransaay bara 2017 taasifamerratti himannaawwan ‘Raashiyaan harka keessa galfatteerti’ jedhan dhagahamuu erga eegalanii booda bahan.
Akka seera biyya Faransaayitti angawootni odeeffannoowwan sobaa gama miidiyaalee hawaasummaatiin tamsa’an haquufi fuulawwan odeeffannoowwan kunneen maxxansanis ugguruu danda’u.
Itoophiyaan labsii haasaa jibbiinsaafi odeeffannoo sobaa ittisuufi to’achuuf baafte hojiirra oolchuu erga eegaltee bubbulteerti.
Kaayyoon labsii kanaas namootni wayita mirga yaada isaanii bilisa ta’anii ibsachuu fayyadamanitti haasaa walitti bu’iinsa yookin hookkara kakaasu taasisuurra akka of qusatan gochuudha.
Akka labsii kanaattis yakki haasaa jibbiinsaa yookin odeeffannoo sobaa tamsaasuu fuula miidiyaa hawaasaa hordoftoota 5,000 ol qabuun yookiin tajaajila birodkaastiin yookiin maxxansa yeroo yeroon bahuun raawwatame yoo ta’e hidhaa hanga waggaa sadii fi adabbii maallaqaa birrii 100,000 hin caalle adabsiisa.
Haa ta’u malee wayita labsiin haasaa jibbiinsaafi oduu sobaa ittisuufi to’achuuf bahe ragga’utti yaaddoowwan “labsichi mirga yaada osii bilisaan ibsachuu kan sarbudha” jedhan dhagahamaa turaniiru.
Gama biraatin immoo biyyaaleen akka Finlaand fi Siwiidin lammiilee isaaniif waa’ee odeeffannoo sobaa barsiisuufi hubannoo uumuun facaatii odeeffannoo sobaa hir’isuuf hojjechaa jiru.
Seerawwan biyyaaleen garagaraa facaatii odeeffannoowwan sobaa ittisuufi to’achuuf baasan bal’inaan dubbisuuf geessituu kana cuqaasaa: https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/#russia%22
Odeeffannoowwan birootiif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa.